တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | cincds
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ - ၇
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် H.E.Mr. Sun Guoxiang အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင် ရိပ်သာဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးမြင့်ထွန်းနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူ ကောင်စစ်ဝန် Mr. Yang Shou Zheng နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်၊ မိတ်ဆွေကောင်း၊ မိတ်ဆွေဟောင်း၊ မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး သမိုင်းကြောင်း တစ်လျှောက် ချစ်ကြည်ရေး ကောင်းမွန်ခဲ့သည့် အခြေအနေများ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် တရုတ်နိုင်ငံက အလှူငွေများနှင့် အခြားလိုအပ်သည်များ လှူဒါန်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ မည်သည့်နိုင်ငံမဆို မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်မျိုးကိုသာ ကျင့်သုံးသင့်သည့် အခြေအနေများ၊ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် တပ်မတော်က စိတ်ရှည်သည်းခံစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ တိုက်ပွဲများမဖြစ်ပွားသည့်ဒေသများတွင် အေးချမ်း တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လုပ်ဆောင်လာနိုင်သည့် အခြေအနေများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နပွေညျတျော၊ နိုဝငျဘာ - ၇
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျ H.E.Mr. Sun Guoxiang အား ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျ ရိပျသာဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး မိုးမွငျ့ထှနျးနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယျစားလှယျနှငျ့အတူ ကောငျစဈဝနျ Mr. Yang Shou Zheng နှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့တရုတျနိုငျငံတို့သညျ ဆှမြေိုးပေါကျဖျော၊ မိတျဆှကေောငျး၊ မိတျဆှဟေောငျး၊ မဟာဗြူဟာမိတျဖကျနိုငျငံမြားဖွဈပွီး သမိုငျးကွောငျး တဈလြှောကျ ခဈြကွညျရေး ကောငျးမှနျခဲ့သညျ့ အခွအေနမြေား၊ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျမြားအတှကျ တရုတျနိုငျငံက အလှူငှမြေားနှငျ့ အခွားလိုအပျသညျမြား လှူဒါနျး ကူညီဆောငျရှကျပေးလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ မညျသညျ့နိုငျငံမဆို မိမိတို့နိုငျငံနှငျ့ ကိုကျညီသညျ့ ဖှဲ့စညျးပုံစနဈမြိုးကိုသာ ကငျြ့သုံးသငျ့သညျ့ အခွအေနမြေား၊ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ တပျမတျောက စိတျရှညျသညျးခံစှာဖွငျ့ ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ တိုကျပှဲမြားမဖွဈပှားသညျ့ဒသေမြားတှငျ အေးခမျြး တညျငွိမျမှုရှိပွီး ဖှံ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးမြား တိုးတကျလုပျဆောငျလာနိုငျသညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေး ဆှေးနှေးမှုမြား ဆကျလကျဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ ဆှေးနှေးခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။